I-intanethi yekhasino yokungcakaza, i-roulette, iblackjack kunye nezinye ezininzi
Ibhonasi kwi-100 Euro kunye ne-40 Spins yasimahla
Dlala uMlawuli weReseli
Ngomthetho, ukungcakaza zizo zonke iintlobo zeelotto, imidlalo kunye neetotali ezivelisa ngokungapheliyo i-winnings yabadlali. Kwiimeko ezininzi, ukuphumelela kuchongwa ngethamsanqa. Nangona kunjalo, kukho imidlalo yokungcakaza esinokuyabela ngempumelelo iqela labo imicimbi yeqhinga.
EPoland, ukungcakaza kulawulwa ngumthetho we-19 Act kaNovemba 2009. Yaba sisigqibo esibizwa ngokuba ngu-Dz. I-2009.201.1540 ilawule ukungcakaza njengemidlalo yamathuba, iibhuki 'kunye neelotto, kunye nabanini bethotho. EPoland, ngelishwa, ukungcakaza akukho semthethweni - njengakwamanye amazwe amaninzi. Ngakolunye uhlangothi, i-Casinos inezithintelo ezininzi - kwisixeko apho bambalwa abahlali be-200 amawaka abahlali bahlala, yekhasino ye-1 kuphela enokuthi isebenze ngokusemthethweni.
Zisebenza njani i-Casinos ze-intanethi?
Abasunguli babo bafaka izicelo zamaphepha-mvume kumazwe apho umthetho kunye nokuvalwa kungcakazo kungangenanga enyanzelweni. Eyona nto ithandwayo Malta - kulapho iikhasino ezinjengeBetsson, iBetsafe, iCasinoEuro kunye nezinye ezininzi zasekwa khona.
Ulawulo lweMalta luvumela ukugembula ukuba kuqhutyekwe ngaphandle kokubekwa imixokelelwano enkulu yerhafu kubaphuhlisi beekhasino (kunokwenzeka ukuseta amakhasino e-US, kodwa iindleko zokufumana imvume ziphakeme kakhulu koosomashishini ukujongana nomthetho waseMelika).
Masibuyele kwizahlulo sokungcakaza, i.e. ukuzonwabisa okukuvumela ukuba uphumelele ngokukhawuleza (okanye ulahlekelwe) isamba semali. Ukwahlulahlulwa kusekwe kuhlobo lomdlalo weqonga kunye nemithetho yomdlalo.
Ezona zidumileyo zezi:
- Imidlalo yekhadi - umzekelo poker
- Roulette -Uhlobo lwaseYurophu nolweMelika
- Omnye wabaphangi -ezona zidume kakhulu ziSizzling Hot Deluxe kunye neNcwadi kaRa
Itotaliyitha kunye nemidlalo yamanani - ngokukhetha amanani nokuzoba indibaniselwano yokuphumelela
Izinto ezintsha zokungcakaza Nangona kunjalo, i-Casinos iya kwinqanaba elongezelelweyo ngokutshintsha ukungcakaza okuqhelekileyo ngokwesiko kunye nokuyithelekisa neenguqulelo zale mihla. Kuyavunywa, ubuchule be-poker, i-roulette okanye iBlack Jack ayiqhelekanga - imidlalo ye-slot ihlala iguqulwa. Sukumangaliswa yimidlalo esekwe kwimidlalo bhanyabhanya yaseJurassic Park okanye kumdlalo weTV. Abaphuhlisi abangcakazayo bazama ukufikelela ekuthandeni komdlali ngamnye.
Ukuqaliswa kweekhasino ezikwi-intanethi yayiyinkqubela nje. Kude kube ngamashumi amabini eminyaka eyadlulayo, akukho mntu wayecinga ukuba i-poker okanye i-roulette inokudlalwa usebenzisa ikhompyuter (singasathethi ke iifowuni okanye iipilisi). Namhlanje bubomi bemihla ngemihla obudala ukhuphiswano olukhulu lweekhasino ezisekwe kumhlaba ezivela eLas Vegas nakwamanye amazwe ehlabathi.